Ibhlog yangaphakathi: Biyun Qu - Galveston County Food Bank
admin Septemba 10, 2021 0 Comment Imfundo yezondlo
Igama lam ndinguBiyun Qu, kwaye ndingumfundi osafundayo ojikelezayo kwiGalveston County Food Bank. Kwibhanki yokutya, sineeprojekthi ezahlukeneyo esele zisebenza, kwaye unokuza nezimvo ezintsha kwaye uziphumeze! Ngelixa bendisebenza apha iiveki ezine, bendincedisa kwiibhokisi zokutya kunye nasekuphuhliseni iiklasi zemfundo yabantwana be-pre-K! Kuqala, ndenze iresiphi ndisebenzisa ukutya okuzinzileyo okuzinzileyo, ndenza umboniso wevidiyo, ndayihlela! Emva koko, sathenga ezo zinto zokutya, sazifaka ebhokisini yezixhobo zokutya kunye namakhadi eresiphi, saza sawathumela emakhayeni abantu! Kwakumnandi kakhulu! Kwaye, ndicwangcise ulwandlalo lweeklasi ezine ezikwi-intanethi zabantwana be-pre-K kunye nokurekhodwa kwangaphambili kwabo! Kuya kubakho amathuba okufundela abantu ngokwamaqela ahlukeneyo ubudala kungekudala!
Ukongeza, ndiye ndaguqulela amaphepha ali-12 emfundo ezondlayo esiTshayina. I-Bhanki yokutya ngoku yenza "Izinto zokutya kwiilwimi ezininzi" kwiwebhusayithi yayo ukunceda abantu abahlukeneyo. Ke, unokunceda kuloo nto ukuba uthetha iilwimi ezininzi.
Sasidla ngokuthatha "uhambo lwentsimi" sityelele amaqabane ethu ukuze ndibone ukuba sinokubanceda ngantoni. Ngeli xesha, siya kwiivenkile zokuthenga siyokuthenga ukutya okanye izinto zokupheka kunye neevidiyo. Ndihlala ndiziva ndinemincili xa sisiya kuthenga. Sikwanceda ukuhambisa ukutya kubantu abaphulukene namakhaya.
Xa ndijonga ngasemva, andizange ndikholelwe ukuba ndifeze izinto ezininzi kangaka kwezi veki zine zidlulileyo! Unokuba namava ahlukileyo kodwa asemnandi apha kuba kuhlala kukho into entsha eyenzekayo! Sebenzisa ulwazi lwakho, ubuchule, kunye nobuchule bokunceda abantu kangangoko unako!
egqithileyo ngeposi Previous: Iimpawu zeHerb
Okulandelayo elilandelayo: Ibhlog yangaphakathi: Nicole